Ogaden News Agency (ONA) – Weerar ay CWXO ku qaadeen garoonka Qabridahre oy shirk ku lahaayeen ciidamada cadawga iyo warbixinadii dagaalada
Weerar ay CWXO ku qaadeen garoonka Qabridahre oy shirk ku lahaayeen ciidamada cadawga iyo warbixinadii dagaalada
Wararka naga soo gaadhaya Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa sheegaya inay dhaceen maalmihii la soo dhaafay dagaalo dhowr ah oo cadawga lagu naafeeyay. Dagaaladan oo kadhacay meelo kala duwan oo dalka Ogadenya ah ayaa waxay u dhaceen sidan;
20/5/13 dawacaale oo dagmmada Shilaabo tirsan dagaal ku dhaxmaray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya waxaa ciidamada cadawga lagaga dilay 4 askari tira kalana waa lagaga dhaawacay.
19/5/13 Duud-geedaale oo dagmada Aware katirsan waxaa ciidamada wayaana loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa wali lahelin.
18/5/13 Dawacalay oo dagmada Shaygoosh ee gobolka Qoraxay katirsan kamiin ay kaxidheen CWXO waxaa soo galay ciidamo uu cadawgu leeyahay waxaana halkaa lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin lagahaynin
21/5/13 Galaca-moogle oo Jigjiga katirsan waxaa ciidamada cadawga loogu gaystay khasaare balaadhan.
21/5/13 Miir-xamardiiq oo Qabridahare katirsan waxaa ciidamada wayaanaha lagaga dilay 2 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
24/5/13 CWXO ayaa weerar qorshaysan kuqaaday garoonka diyaaradaha Qabridahare oo ay shir ku lahaayeen ciidamada gumaysiga Itoobiya waxaana halkaas kunafwaayay 13 askari oo ay kujiraan 2 sargaal.
23/5/13 Quruuraxle oo shaygoosh katirsan waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin lagahaynin.
24/5/13 Iskudhoonlay oo qoraxay katirsan weerar gaadma ah oo ay cwxo kuqaadeen kuwa cadawga oo halkaa kusugnaa waxaa ciidamada gumaysiga lagu gaadhsiiyay khasaare balaadhan.
22/5/13 Caado oo dagmada Danood ee gobolka doolo katirsan kamiin looxidhay ciidamada gumaysiga oo halkaas marayay waxaa lagaga dilay 2 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
23/5/13 Miirdanbas oo Doolo katirsan waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin lagahaynin.
24/5/13 Simane oo Fiiq katirsan CWXO ayaa weerar kuqaaday kolonyo baabuur ah oo ay wateen ciidamada gumaysiga itoobiya waxaana halkaas lagu gubay 1 baabuur halka guwii kalana lagaadhsiiyay khasaare balaadhan.
25/5/13 Xeroqayro oo Galaalshe katirsan dagaal mir ah oo ay CWXO kuqaadeen kuwa cadawga oo halkaas kusugnaa waxaa lagu gaadhsiiyay khasaare aay faahfaahin lagahaynin.
23/5/13 Taaginduur oo Jarar katirsan kamiin ay cwxo xidheen waxaa soo galay kuwa cadawga waxaana lagaadhsiiyay khasaare balaadhan.
24/5/13 Diyaar oo Jarar katirsan waxaa ciidamada wayaanaha lagaga gubay 1 baabuur oo kuwa ciidamada ah waxaa kaloo loo gaystay khasaare kale.
21/5/13 Sheeshadheere oo Jarar katirsan waxaa ciidamada cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahin lagahelin.